Ny fanomezan'ny Fanahy Masina :? Fanambarana, hery, fitaomam-panahy 
Mba hahafantarany hoe inona izany ny fanomezan'ny Fanahy Masina ny taratasy nosoratan'ny Apôstôly Paoly ho an'ny Korintiana dia tsy maintsy tadiavina ao amin'ny soratra masina. Ao amin'ny andininy faha-12 ka hatramin'ny faha-8 no omena ny fanomezana tsirairay.
Ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezana azontsika, raha ny fanomezana ny Fanahy Masina dia miresaka fanomezana manokana izay omena antsika isika miaraka amin'ny tanjona tokana hitahiana ny Fiangonan'i Kristy amin'ny fisehoan'ny iray amin'izany.
Tsy tongatonga amin'ny alàlan'ny finoana ny fanomezam-pahasoavana fa nomena rehefa hitan'ny Ray ny filàna sy ny fandalovan'ny olony. Ireo fanomezana ireo dia voasokajy ho vondrona telo arakaraka ny mampiavaka azy sy ny toetrany.
1 Fanasokajiana ny fanomezan'ny Fanahy Masina
1.1 Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana fanambarana
1.2 Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana hery
1.3 Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana aingam-panahy
Fanasokajiana ny fanomezan'ny Fanahy Masina
Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana fanambarana
Ireo fanomezam-pahasoavana ireo dia ny hitondra fahalalana ho an'ny olombelona ny fisehoan-javatra sasany izay mijanona ho miafina ho tanjona, drafitra na sitrapon'Andriamanitra. Ireto fanomezana ireto dia:
Fanomezana ahafahana mahazo fanambarana manokana izy io. Ohatra mazava momba an'io fanomezam-pahasoavana io dia hitantsika ao amin'i Jesosy ny tenany rehefa nilaza tamin'i Petera izy fa alohan'ny fihavanan'ny akoho mihira dia handà azy intelo izy io. (Matio 26:34)
Ity teny fanambarana ity dia afaka amin'ny alàlan'ny nofy, fahitana, faminaniana na feo iray ihany Dios.
Ity fanomezana manokana ity, raha aseho, dia tsy manambara tranga amin'ny ho avy fa tsy tamin'ny lasa na ankehitriny izay ao amin'ny asan'ny maizina.
En toko faha-4 ao amin'ny Filazantsara Raha ny filazan'i Saint John dia hita ny tantaran'ny vehivavy samaritana, izay nilazan'i Jesosy taminy fa manana vady dimy izy ary ny vadiny dia tsy vady ankehitriny, izany dia ohatra iray mazava amin'ny fisehoana io fanomezana io.
Ny fanomezam-pahasoavan'ny fahaiza-manavaka
Fanomezana ara-panahy madio tokoa izy io ary mampiseho ny fananganana ny fiangonan'i Kristy. Amin'izany fanomezana izany dia azonao atao ny mamantatra hoe iza ilay fanahy miasa amin'ny olona sasany.
Ny Apôstôly Paoly dia mampiseho amintsika mazava ity fanomezana ity rehefa nahafantatra ny fanahy miasa tao Elimas, io andalana io dia hita ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly ao amin'ny toko 13 andininy faha-9 sy 10.
Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana hery
Karazam-pahasoavana avy any an-danitra izay maneho ny tenany mba hampitombo ny finoana ny mpino sy hahatonga an'izay tsy mino ny herin'Andriamanitra.
Fanomezana fanomezana amin'ny fahagagana
Iray amin'ireo fanomezana mahatalanjona indrindra izy io satria rehefa maneho izany dia atao amin'ny alàlan'ny fahagagana mahatalanjona, miaraka amin'ny zavatra izay, tsy ho vitan'ny olombelona.
Ao amin'ny tenin'Andrimanitra no ahitantsika ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy dia ny mamadika ny rano ho divay, zavatra izay tsy misy olona atao, nataony ary nahagaga ireo rehetra tao (Jaona 2: 9) Iray amin'ireo fahagagana malaza indrindra an'i Jesosy.
Io finoana io izay nomen'ny Fanahy Masina fa tsy finoana voajanahary atrehin'ny olona fa mandeha lavitra. Io finoana io dia mitarika ilay olona hino ny tsy azo atao, ao amin'ny hery ambonimbony, amin'ny zavatra mivantana avy amin'Andriamanitra.
Ao amin'ny tenin'Andrimanitra dia milaza amintsika ny lehilahy iray izay milaza fa feno hery sy fahasoavana izy, izany hoe, ny fanomezana ny finoana dia naseho taminy, ity lehilahy ity dia i Stefana ary ny tantarany dia ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly Apôstôly ao amin'ny toko 6 ka hatramin'ny andininy faha-8.
Io fanomezana io dia miseho amin'ny ankamaroan'ny olombelona ary raha tsy misy tanjona masina amin'izany fanasitranana manokana izany. Eto amin'ity fanomezana ity no ampiasaina satria maro ireo fanomezana fanasitranana fa tsy iray hafa tahaka ny an'ny hafa. Izany hoe ny olona iray dia afaka mampiseho ny fanomezana fanasitranana sasany, ka tsy maneho ny tenany amin'ny fanasitranana ny aretina rehetra fa ny sasany.
Ny evanjelika efatra sy ny Bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia feno andalana izay milaza tantaran'ny fahagagana mahavariana.
Ny fanomezan'ny Fanahy Masina: Fanomezana aingam-panahy
Ireo fanomezana ireo dia aseho ho fanamafisana ny Fiangonana. Izy ireo dia fanomezana manintona olona be dia be ary mahatalanjona ny fiaviany sy ny herin'izy ireo rehefa maneho izy ireo.
Iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana izay enjehina indrindra izy io satria mitovy vava iray amin'ireo miteniteny foana amin'ny mpino.
Tsy tokony hafangaro amin'ny minisitra ara-paminaniana izany satria samy hafa tanteraka izy ireo. Ity fanomezana ity dia azo ampiasaina hanentanana, hampiorina, hampiononana, hampianarana ary handresy lahatra. Fanomezana izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny andraikitra sy filaminana satria miteny amin'ny anaran'Andriamanitra.
Ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia fanehoana ny Fanahy Masina, fa rehefa mitranga izany dia karazana fiteny iray ihany no ampiasaina.
Rehefa mihoatra ny iray ny lahy na vavy resahina dia satria miseho ilay fanomezana. Ny karazana lela dia miharihary amin'ny fikasan'Andriamanitra, araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly, andininy 2 andininy 12 ka hatramin'ny XNUMX.
Rehefa miseho izany fanomezana izany dia mampiasa ny vatan'ny mpino fa ny fon'i Kristy ihany no hifehezana ny zava-drehetra.
Fandikana ny fiteny:
Io fanomezana io, toy ny farany, dia ho hita rehefa manomboka ny fotoam-pahasoavan'ny fahasoavana, izay vanimpotoana iainantsika. Ity fanomezam-pahasoavana ity dia naseho hanome dikany ny fiteny isan-karazany izay afaka hiteny rehefa mifehy ny Fiangonana ny Fanahy Masina.
Nanoro hevitra ny Korintiana ny Apôstôly Paoly hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra rehefa misy mpandika teny hita eo amin'ny toerana, saingy tsy maintsy ataon'izy ireo am-pilaminana izany, miaraka amin'ny tanjona hitandroana ny filaminana eo amin'ireo fiangonana ary hahafahantsika mahazo ny hafatra hoe Andriamanitra Te hanome ho an'ny fiangonana izy.
Ny fanomezan'ny Fanahy Masina dia omena ho an'ny tanjon'Andriamanitra ary tsy maintsy aharihary mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny tanjony tsy misy fanelingelenana.
Ny mpino iray dia afaka mamela ny fanomezana hiseho amin'ny fotoana izay hijereny azy, satria mbola mitana ny safidiny malalaka izy hamela ilay fanomezana manome na tsia.
Vakio ihany koa ity lahatsoratra ity ilay zanaka adala y Ny fiadian'Andriamanitra.
Fivavahana Bodista - Fantaro amin'ny antsipiriany ity fivavahana ity